मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता) - Web Tv Khabar
२०७८, मंसिर १९ गते आइतवार
आजको सुन चादीको दरभाउ
विचित्र संसार शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन संस्कृति साहित्य प्रवास अपराध
# इसीडी शिक्षक
# विद्यालय कर्मचारी
# शैक्षिक संस्था
मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता)
आश्विन २६, २०७८ मंगलवार १३:३७ बजे
पोखरा । गण्डकीमा ६० सांसद छन् । संविधानले २० प्रतिशत अर्थात् बढीमा १२ जनालाई मन्त्री बनाउने छुट दिएको छ । डोबाटे विश्वकर्मालाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै गण्डकीले आफ्नो कोटा पुर्‍याएको छ । यहाँ कोटा मात्रै पुगेन, मन्त्री मण्डलमा रेकर्ड कायम भयो । अघिल्लो सरकार हुँदा ७ जना मात्रै मन्त्रि थिए । एमाले नेतृत्वकै सरकारले मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍यायो । ७ बाट ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्यो । अन्तिम समयमा फुटाईएको मन्त्रालयमा मन्त्रि पनि नियुक्त गर्न नपाउँदै सरकार ढल्यो र गठबन्धनको सरकार बन्यो ।
कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको समर्थन छ । जसपा र माओवादी सरकारमै सहभागी छ । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ पनि मन्त्री पद सुनिश्चित गर्दै अघिल्लो सरकारको समर्थन छोडेर नयाँ गठबन्धनमा लागे । यहाँ झिनो बहुमत (३१ मात्रै) बाट सरकार बनेको हो ।
अहिले एमाले मात्रै विपक्षमा छ । एमालेसँग २७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डोबाटेलाई सोमबार विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । उनले सोमबार साँझ नै सपथ लिईसकेका छन् । दशैं लगत्तै मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन पनि हेरफेर हुने बताईएको छ । डोबाटे साउन ८ मै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । अन्तिम समयमा उनको नाम मन्त्रीको सूचीमा परेन ।
त्यसपछि सन्चार माध्यमहरुले संविधान र समावेशी सिद्धान्तको विरुद्ध सरकार गएको भन्दै आलोचना गरे । सरोकारवालाको चासो पनि मन्त्री परिषद् विस्तारमा गयो । चौतर्फी दवाव पछि नेपालीले डोबाटेलाई मन्त्री बनाएका हुन् । उनी कांग्रेसभित्र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहमा गनिन्छन् । तर प्रदेशसभामा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्यानल बलियो छ । मुख्यमन्त्री पौडेल समूहबाटै भएपनि आन्तरिक दवावका कारण उनले डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन सकेका थिएनन् ।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि सल्लाह नै नगरी उनले मन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । प्रश्तुत छ डोबाटे विश्वकर्मासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
मन्त्री त बन्नुभयो, जिम्मेवारी के हो ?
मन्त्रालयको टुंगो छैन । सपथ खाएँ । अब संविधानले जे भनेको छ, मुख्यमन्त्री ज्युले जे जिम्मेवारी दिनुहुन्छ । त्यहि पुरा गर्छु । संविधानले दिएको अधिकारकै अधिनमा रहेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन भुमिका खेल्छु ।
दुई महिनाअघि मन्त्री बन्नबाट बन्चित हुनुभयो । तपाईंको नाम अन्तिममा काटियो, अहिले कसरी मन्त्री बन्नुभयो ?
पार्टीमा छलफल भयो होला । मिडियाले धेरै चासो र चिन्ता गर्‍याे । मिडियाको दवावले पार्टीलाई महशुस भयो होला । पार्टीले गल्ती गरेको महशुस गरेर मन्त्री बनायो भन्ने ठानेको छु । यो संविधानको कार्यान्वयन हो । समानुपातिक सिद्धान्तलाई पालना गर्‍याे, गण्डकी सरकारले भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो, खुशीको अनुभुति गरेको छु । पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो । गौण रुपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पोखरा आउनु र तपाईं मन्त्रीमा नियुक्त हुनुमा कुनै तादम्यता छ ? कि मुख्यमन्त्रीले स्वविवेकले गर्नुभयो ?
प्रधानमन्त्री ज्यु पनि आउनुभएको थियो । त्यहाँ कुरा भयो । मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटें । अरु कुरा त गरिनँ । आशिर्वाद मागें । प्रधानमन्त्री र सभापतिलाई कार्यकर्ताको हैसियतले भेट्नु सामान्य भयो । मैले आशिर्वाद चाहियो हजुर भनें । उहाँले आशिर्वाद दिनुभयो । मन्त्री भएँ । खुशी छु । दशैंको बेला मागेको आशिर्वाद लाग्दो रहेछ । मलाई पूरा भयो । एउटा विश्वास नै त रहेछ आखिर ।
मन्त्रालयको पनि छलफल भएको छ र ? कुन मन्त्रालयमा जाने चाहना छ ?
त्यस्तो कुनै कुरा भएको छैन । तर सल्लाह होला । मैले यो देउ भनेर भएन । सरकारले निर्णय गर्ने हो । प्रदेश सरकारले छिटै जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
# डोबाटे विश्वकर्मा
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनेमा ९९ प्रतिशत ढुक्क हुनुहोस् : विशाल भट्टराई [अन्तर्वार्ता]
महाधिवेशनबाट एमाले अझै मजबुत भएर आओस्, हाम्रो शुभकामना : महन्थ ठाकुर [अन्तर्वार्ता]
एमालेमा गुटबन्दी सकियो, चितवन प्रचण्डको बिर्ता होइन : पद्‌मा अर्याल [अन्तर्वार्ता]
सहमति नहुने हो भने अध्यक्षमा दर्जनौँले उम्मेदवारी दिनुपर्छः योगेश भट्टराई [अन्तर्वार्ता]
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, तोलाको कति ?
कमल थापाले अब ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोकेर नहिँड्ने
कांग्रेस अधिवेशन : अझै सुरु भएन प्रदेश १ को मतगणना
पिपुल्स हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासन गर्ने, प्रत्याभूतिकर्तामा नागरिक लगानी कोष
यस्तो छ आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
विद्यालय कर्मचारीलाई १७ हजार र इसीडी शिक्षकलाई १५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराइयो [सूचीसहित]
यी हुन् शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब नदिने ६० स्थानीय तह [फलाेअप]
शिक्षकहरूका तलबलगायतका समस्या समाधान हुन्छ : केपी ओली
फुट्यो विप्लव नेतृत्वको माओवादी, नेकपा (क्रान्तिकारी) गठन
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक र कर्मचारीहरूका लागि जारी गर्‍यो यस्तो सूचना
शिक्षामन्त्रीले दोहोर्‍याएर भने- पालिकाहरूले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब अनिवार्य दिनुपर्छ
प्रदेश २ लाई जसपाले दियो ‘मधेस प्रदेश’को नाम, अध्यक्षमा यादव
सर्लाहीमा फेरि गोली चल्यो
वेब टिभी नेपाल प्रा. लि.
टेलिफोन : ०१- ५७०५१०१
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नम्बर
२०७० / ०७७ - ७८
प्रकाशक : जनक दिप पराजुली
सम्पादक : अमन कोइराला
Copyright © 2021 All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology